🥇संसारमा सब भन्दा अविश्वसनीय एयरपोर्टहरू
हामीमध्ये धेरैले उडानको डरलाई जितेका छौं। अन्य, यति धेरै छैन। तर सबै कुरा, हामी यो महसुस गर्दछौं कि हामी विश्वका सब भन्दा अविश्वसनीय एयरपोर्टहरू छनौटमा उत्रिएका जस्तै एअरपोर्टमा उडान गर्ने वा अवतरण गर्ने बित्तिकै खाली हुन्छौं।
तेन्जिzing्ग-हिलारी, लुक्ला (नेपाल)
अक्सर यो भनिन्छ कि यो विश्वको सबैभन्दा खतरनाक एयरपोर्ट हो। यो सहर हो जहाँ प्राय: साहसीहरू जो सगरमाथाको शीर्षमा पुग्न चाहन्छन्। त्यो साहस सुरु हुन्छ जहाँ, सही?
आल्प्स पहाडहरूको बीचमा अवस्थित, ट्र्याकमा १ 18.।% को ढाल छ र सामान्यतया हिउँले भरिएको हुन्छ। केवल विशेषज्ञ पाइलटहरूको लागि।
राजकुमारी जूलियाना, सेन्ट-मार्टिन (नेदरल्याण्ड एन्टिलिस)
यसको धेरै छोटो रनवेका लागि प्रसिद्ध छ, र विशेष गरी किनभने यो समुद्री किनारमा नै छ, समुद्री किनारको माथि १० वा २० मिटर तल अवतरण गर्न पनी। तिनीहरू लगभग सीधा समुद्रमा हाम फाल्न चाहन्छन्!
केवल यो भन्दै कि ट्र्याक शहरको बीचमा छ र एक धेरै व्यस्त सडकको साथ (स्तर क्रसिंगको साथ) मिल्दछ, सम्भवतः यो सम्पूर्ण शहरको सब भन्दा ठूलो यातायात जामको साथ ...
जुआन्चो ई। यारोस्क्विन, सबा (नेदरल्याण्ड्स एन्टिलिस)
अवश्य पनि, यसलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न जुन यो संसारको सबैभन्दा चिलि। ट्र्याक हो: छोटो, एक छेउमा पहाडले घेरिएको, र अर्को तिर चट्टानहरू। अन्तमा, एयरपोर्ट नजिकैको टापुमा सारियो।
आइस रनवे (अन्टार्कटिक)
यसको नामको शाब्दिक अर्थ आइस रिink्क हो, किनकि यो त्यो जग्गामा नै बनेको छ। यो सिमेन्ट जत्तिकै स्थिर छ, तर अलि बढी चिप्लो।
के तपाईंलाई ट्र्याक छोटो लाग्छ? तिनीहरूले यसलाई २००० मा विस्तार गरेपछि ... समुद्रमा १ 180० सिमेन्ट पिलरहरूको साथ। यात्रुहरू लैंडिंगको क्रममा लाइफजेकेट फुलाउन सक्षम हुनुपर्दछ।
कन्साइ, ओसाका (जापान)
यो कृत्रिम टापुमा निर्माण गरीएको थियो र १ work 199 in मा7बर्षको काम पछि खोलियो। यसले धेरै भूकम्प, टाइफुनहरूको सामना गर्यो ... जब १ 199 199 १ मा उनीहरूले महसुस गरे कि टापु meters मिटरसम्म डुब्दै छ, वजनलाई समर्थन गर्न सक्ने स्तम्भहरू सुधार गरिनु पर्‍यो।
कंगनहास, साओ पाउलो (ब्राजील)
यो शहरको बीचमा छ भन्ने कुराको साथ, गगनचुम्बी भवनहरूले घेरेको, हामी विश्वास गर्छौं कि सबै भनेको छ, हैन?
सेन्ट मार्टिन, सेन्ट-बार्थलेमी (वेस्ट इण्डिज)
यो मान्यता हुनुपर्दछ कि हेराईहरू सुन्दर, समुद्री, हिमाल हो, तर एयरपोर्टको रनवेमा नहेर्नुहोस्।
" विश्वको सब भन्दा अविश्वसनीय एयरपोर्ट " को यो पोष्टले हामीलाई थुप्रै विमान चालकहरूको विशेषज्ञता देखाउँदछ जसले हामी उडानमा उडान गर्दछौं। तर मान्यता दिनुहोस् कि समुद्र, पहाड, गगनचुम्बी इमारत वा शून्यता हेर्दा हामी कहाँ जान्छौं त्यत्ति शान्त छैन भन्न मिल्दैन।